Afaka Mamboly Marijuana any Michigan ve ianao - Lalàna Marijuana any Michigan ho an'ny fampiasana olon-dehibe sy fambolena an-trano
Afaka Mamboly Marijuana any Michigan ve ianao?
“Afaka hamboly Marijuana ve aho?” dia fanontaniana be mpitia any amin'ny fanjakan'ny Etazonia, Michigan dia azo antoka fa tsy misy ankanavaka. Alohan'ny hanombohanao mitombo ao an-trano any amin'ny fanjakanao dia alao antoka fa fantatrao ny valiny. Mankatoava ny lalàna momba ny fanjakana, na raha tsy izany dia mety iharan'ny sazy heloka bevava ianao.
Ara-dalàna ny fambolena marijuana any Michigan. Saingy misy fitsipika sasany tokony harahinao. Raha liana te hanangana marijuana rongony ao an-trano ianao dia izao no tokony ho fantatrao lalàna marijuana any Michigan, mba hanampiana anao hisoroka ireo toe-javatra tsy mahazo aina miaraka amin'ny lalàna.
Marijuana ohatrinona no azonao atao Mitombo any Michigan
Betsaka. Ny olon-dehibe 21 na mihoatra dia afaka mitombo hatramin'ny zavamaniry 12 ao an-trano. Ity dia fitomboan'ny trano ho an'ny olon-dehibe, izay tsy mitovy amin'ny fanjakana hafa izay mamela ny fitomboan'ny trano fitsaboana fotsiny. Mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny fanjakana izay mamela zavamaniry enina fotsiny isam-pianakaviana, any Michigan ianao dia afaka mamboly avo roa heny amin'izany fetra izany, i Alaska no fanjakana hafa misy zavamaniry 12 isaky ny trano fetra.
Mariho fa ny fetra dia isan-tokantrano fa tsy isan'olona. Midika izany, raha misy olon-dehibe roa dia ny roa ambiny dia roa ambin'ny folo fa tsy 24 zavamaniry.
Ho an'ny mpikarakara marijuna ara-pitsaboana, any Michigan dia avela hatramin'ny dimy ny marary voasoratra anarana amin'izy ireo ary afaka mitombo hatramin'ny 12 ny zavamaniry ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Ity ny Lahatsoratra feno an'ny lalàna izay mamela ny fitomboan'ny trano any Michigan
Mila fahazoan-dàlana hamboly marijuana any Michigan ve aho?
Mba hambolena rongony ao an-tranonao any Michigan raha toa ka manaraka ny fetim-panjakana voalaza ianao ary natao hampiasaina manokana, dia tsy mila fahazoan-dàlana.
Aiza no ahafahako mamboly Marijuana ahy any Michigan
Manana fetrany amin'ny toerana itahirizanao ny zavamaniry anao i Michigan. Milaza ny lalàna fa:
Ny zavamaniry dia tsy ho hitan'ny besinimaro, raha tsy mampiasa binocular, fiaramanidina na fitaovana fanampiana optika hafa.
Ny zava-maniry dia tsy afaka maniry eo ivelan'ny faritra mihidy misy hidin-trano na fitaovana fiarovana hafa miasa izay mametra ny fidirana amin'ilay faritra.
Azoko atao ve ny mifantoka ny rongony?
Raha mponina ao Michigan ianao izay liana amin'ny fanovana ny voninkazo maniry ho lasa namboarina namboarina, ny vaovao tsara dia tsy misy fetra ny habetsaky ny fifantohana azonao tazonina amin'ny zavamaniry nambolena any Michigan.
Ny vaovao tsy dia tsara dia ny fampiasana zavatra mora miovaova mba hamokarana concentré dia voarara tanteraka any Michigan. Anisan'izany ny fampiasana butana, hafanana be, na fitaovana laboratoara mampidi-doza miaraka.
Mbola afaka mampiasa hafanana voajanahary na fomba miorina amin'ny rano ianao mba hahavitana ny sainao manokana, toy ny kitapo bubble na etanol tsy misy hafanana na tsindry.
Ny tiana hambara dia ny famokarana rongony amin'ny alàlan'ny akora mora miovaova raha toa ka manana trano tsy misy fonenana manana fahazoan-dàlana.
Azoko atao ve ny mivarotra izay ambiko ao an-trano?
Any Michigan, ny mpamboly trano dia tsy afaka mahazo tombony amin'ny fivarotana ny tranony efa lehibe. Tsy ara-dalàna ny fivarotana marijuana tsy misy fahazoan-dàlana ara-panjakana sy eo an-toerana.
Na izany aza, tsy ara-dalàna ny fanomezana marijuana sy vokatra ampidirina amin'ny olon-dehibe mihoatra ny 21 taona any Michigan.
Azonao atao ny manome voninkazo azo ampiasaina hatramin'ny 2.5 grama na fifangaroana 15 grama.